CFM: “Miisa 1 300 ireo mangataka fanonerana” | NewsMada
CFM: “Miisa 1 300 ireo mangataka fanonerana”
Miroso amin’ny fametrahana fitondram-panjakana vaovao ny firenena amin’izao. Amin’izany, mbola misy ny tavela amin’ny fangatahana fanonerana sy fanarenana ny fahavoazana noho ny antony politika teo aloha…
“Momba ny fanonerana ireo niharam-pahavoazana noho ny politika sy ny fanarenana ny fahavoazana, efa 1 300 any ho any ny fangatahana tonga ato aminay.” Izay ny nambaran’ny filohan’ny Komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM), i Maka Alphonse, teny Ampefiloha, omaly, momba ireo antontan-taratasy fangatahana fanonerana noho ny fahavoazana noho ny antony politika. Eo koa ny fanarenana ny fahavoazana amin’izany.
Mizara roa izay fangatahana izay, araka ny fanazavany. Misy ny fangatahana mifandraika amin’ny vola, fanonerana noho ny fahavoazana. Ao ny fanarenana ny fahavoazana: tsy fisondrotan’ny miaramila grady araka ny tokony ho izy sy ara-potoana, ohatra. Nefa misy fiantraikany eo amin’ny fiainan’ny olona izay. Maro amin’izy ireo nanao fangatahana no mpiasam-panjakana, miaramila…
Na izany aza, manao fanadihadiana ifotony ny CFM ny amin’izay hoe fahavoazana izay: sao olona nanao fahadisoana goavana amin’ny asany fa mialokaloka ao ambadiky ny fitondrana izany any amin’ny CFM… hanome izay fanonerana na fanarenana ny fahavoazana.
Hatrany amin’ny mpampiasa sy ny mpiara-miasa ny fanadihadian’ny CFM ny amin’izay nahatonga ny fahavoazan’izay manao fangatahana: inona marina, ohatra, ny tsy nampisondrotra grady azy, raha miaramila izy?
Tsy mbola misy tetibola avy amin’ny fanjakana hanaovana fanonerana ho an’ireo niharam-pahavoazana noho ny antony politika hatramin’izao, na amin’ny tetibolam-panjakana 2019 aza. Miankina amin’ny politikam-panjakana izay.
Tsy mbola laharam-pahamehana…
Saika voateniteny hatrany ny amin’izay fangatahana fanonerana sy fanarenana noho ny fahavoazana vokatry ny raharaham-politika izay. Mitombo an-dalana aza izany. Tsy mbola laharam-pahamehana sy tsy zava-dehibe amin’izao fahasahiranam-bahoaka izao, matoa tsy tena imasoana? Eny, na eny anivon’ny fahefana mpanao lalàna aza, ohatra.
Mba ahoana koa ny fanonerana sy fanarenana ny fiainam-bahoaka ifotony noho ny antony politika hatramin’izay? Tena mila atrehina amin’izay, indrindra amin’izao fitondrana vaovao izao…